10 Best Places hitsidika In Atsimo Italia | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best Places hitsidika In Atsimo Italia
(Last Nohavaozina: 28/01/2020)
The mafana Weather tsy ny mbola. Mbola fotoana sy ny antony tsara hitsidika Italia Atsimo tamin'ity volana ity! South Italy dia manana tolotra mahatalanjona. The Best Places hitsidika any Atsimo dia ahitana Italia; tsara tarehy eny anelanelany ny mampivarahontsana morontsiraka, sary tonga lafatra tora-pasika, mahafatifaty nosy amoron-tsiraka sy ny plethora ny tanàna manan-tantara sy ny zana-bohiny. Tena sarotra ny tery amin'ny lisitra nidina ho any fotsiny 10, fa eto no 10 toerana tsara indrindra mba hitsidika in South Italia.
Inona no atao hoe nankany Italia tsy mamaly ny Amalfi Coast? Io faritra manokana ny faritra atsimon'i Italia no iray amin'ireo tsara indrindra sy malaza izao tontolo izao! Mamelatra avy any Naples any Salerno, ny fari-Amalfi tolotra mampivarahontsana toerana tsara tarehy, tanàna tsara tarehy izay mamihina ny tendrombohitra, ary ny sasany mahaliana toerana manan-tantara.
Ity faritra voaaro dia manasongadina ny sasany idyllic tanàna amoron-tsiraka toa an'i Amalfi, Erchie, Minori sy Positano - tanàna ireo dia manana andianà trano miloko maro izay niisa hamely ny tehezan-kavoana ary manome sary tonga lafatra sary fahafahana.
koa, vohikala toy ny Villa Rufolo in Ravello manome hevitra manan-tsahala manerana ny Ranomasina Mediterane.
Sorrento manana ny misy ao fa ny mpizaha tany mahita mampahery ary koa ny manam-paharoa sy farany ambony rakitry ny ela amidy ao an-tanàna taloha. Baka miala avy eto amin'ny Nosy Capri, ary izany dia ny hoe mitsambikina avy eny hevitra lehibe ho an'ny Pompéi. Na izany aza, Sorrento dia fantatra ihany koa ho an'ny Gourmet tsara nahandro, mahatalanjona hantsam-bato fonenana (na dia tsy tora-pasika), sy mahatalanjona fomba fijery Volkano Vésuve.
Bologna ny Pompei Lamasinina
Tanàna fahiny io dia napetraka manamorona ny morontsiraka be vato ny Ranomasina Mediterane. Ny ritzy seranana dia iray amin'ireo toerana mafampana ambony any Italia. Raha te-hijanona eto nandritra ny vanin-taona mafana dia mety tsy maintsy boky tsara mialoha mba hahazoana voafidy ny trano fandraisam-bahiny tahaka ny efitra fandrihana FAST. Rehefa isika manomboka mirona any amin'ny faran'ny vanim-potoana mafana, dia mety manana vintana amin'ny minitra farany Bookings!
Ny sasany mangatsiatsiaka tantara, Paestum dia tanàna ao amin'ny tany Italiana, fa efa naorina ny Grika fahiny raha mbola tany fanaraha-maso ny 'ity faritry ny Italia! Avy eo dia fantatra amin'ny anarana hoe Poseidonia araka ny andriamanitry ny ranomasina.
Ilay teny grika trano ihany no mendrika ny fitsidihana ka tandremo tsara ny hametraka izany ho ny faritany haleha izy Ankoatra ny nitsidika ny telo niaro grika tempoly tsara fa tsy maintsy mahita. Ny tranainy indrindra dia naorina momba 550BC (manome na maka isan-taona) ary ny Tempolin'i Hera izay mahagaga.
5. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Naples
Naples, na Napoli, Miankina amin'ny inona no fiteny, no tanàna lehibe indrindra fahatelo any Italia. Raha tsorina, misy ny sasany tena mpanohitra heviny momba ity ampahany amin 'Atsimo Italia. Ireo sasany dia goavana, maloto, heloka bevava nitaingenanao hatrizay nanananao ahy ka lavo mitokana, ny hafa dia edgy sy rivotra. Na inona na inona mitsoka ny volo indray, dia angamba? Zavatra iray no azo antoka. Io amoron-tsiraka tanàna Southern manana ny toetra!
maro Anarana iombonana amin'ny toerana tena sakafo Avy ao amin'ny Naples sy ny manodidina faritra toy ny pizza, ary spaghetti. Ireo lovia dia entina ho zava-dehibe eto, ary matetika mampiseho vaovao, an-toerana lehibe voafehy. manintona mpizaha tany in Naples ahitana be Moyen Âge lapa, New Castle, ary koa ny amoron'ny ranomasina fiarovana mafy ny Castel del Ovo. Ny tanàna ihany koa manaraka ny Vésuve, ny hany mpanao volkano eo amin'ny kaontinanta Eoropeana.
6. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Alberobello
Ny tanànan'i Alberobello Tsy manam-paharoa ao fa niaro tsara indrindra ohatra Trulli maritrano mba ho hita ao amin'ny rehetra Italia (tsara, noho izany dia nisy nanambara tamin'i).
Trano naoriny teo an-Trulli fomba zavatra nataon-bongo tafo vato tsy mampiasa rihitra (anefa, Ahy tsy mpanorina dia tsy nanonona ahy amin'izany). Ny trano tranainy indrindra mampiaraka avy tamin'ny taonjato faha-14 sy ny tanteraka mahatalanjona, mahatonga izany ny iray amin'ireo dia tsy maintsy hahita sy tanàna tsara tarehy ao amin'ny faritra atsimon'i Italia mba hitsidika.
Naples ho Monopoli Lamasinina
7. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Tropea
Jereo, Mampitandrina anao aho mialoha. Ny sary fahafahana eto amin'ity toerana ity dia very saina. Mitandrema mba tsy malahelo avy ny tena zavatra! Ny tsara tarehy tanàna fahiny ny Tropea dia mihantona ny eo an-tampon'ny harambato sy sasany, noho ireo porofo manerana ny lalana avy amin'ny tery fasika amoron-dranomasina, atao hoe: ny efa naorin'i Hercules ny tenany.
Raha toa ianao ka hizaha, misy roa fiangonana tsara tarehy in Tropea koa, ny Santa Maria do Isola dia fiangonana fahiny izay natao amin'ny nosy iray nandritra ny taona maro siltation na dia vokatry ny any amin'ny tany namorona tetezana eo amin'ilay nosy sy ny Tanibe. Ny hafa dia ny katedraly; dia manana unexploded roa baomba miaraka amin'ny WW2 nipetraka teo ivelan'ny varavarana ny fiangonana. Mponina nino ny trano dia voaro ny mpiaro masina mba mijery ny dingana!
Ny fiangonana manao io irery ihany no iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra amin'ny faritra atsimon'i Italia. Ho tia azy ianao!
Vibo Marina ny Tropea Lamasinina
Catanzaro ny Tropea Lamasinina
Cosenza ny Tropea Lamasinina
Lamezia Terme ny Tropea Lamasinina
8. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Capri
Ara-teknika nosy kely iray, Capri manana tanàna tsara tarehy sy Marina fa tsy maintsy hijery. Ny nosy rehetra dia manan-karena amin'ny tantara sy ny angano ary ny iray mahafinaritra toerana tsy maintsy hitsidika rehefa any amin'ny faritra.
Raha mitady zavatra mba hahita, Tany an-tranon'i Tiberio Mpanjaka Romanina (Villa Jovis) Mbola iray amin'ireo toerana lehibe ny mahita ao amin'ny nosy, ary toy izany koa ny Blue Grotto. Ny drano lava-bato ihany azo idirana sambo ary raha tsy misy tsara samonta (dia ho vonona mba hanafoana).
9. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Pompéi sy Herculanum
Pompéi sy Herculanum roa Romanina tanàna sy vohitra izay voafafa mandrakizay Volkano Vésuve, rehefa nipoaka ny lalana miverina any 79 AD.
Angamba no malaza indrindra tamin'izy roa lahy, dia ny tanànan'i Pompéi, izay azonao izao mirenireny manodidina sy hijery rehefa any amin'ny faritra. mahatsiravina 3,000 ny olona maty tany amin'ny tanàna, fa ny lavenona mafana faty mandrakizay ny sisa tavela ho inona izany amin'izao andro izao. Aoka ianao ho fampitandremana, dia afaka mahazo tsara tarehy be atao eto, toy izany drafitra mifanaraka amin'izany ary mahatsiaro anao mety tsy maintsy milahatra ho tapakila ny hiditra.
Oh, koa ny teo akaiky teo tanàna Herculanum dia kely ary dia manankarena distrika sy manome ohatra amin'ny fomba mpanankarena Romanina fahiny. Ho azo antoka hitsidika ny Herculanum Archaeological Area raha misy tantara Buff!
Bari ho Pompei Lamasinina
10. Best Places hitsidika In Atsimo Italia: Aeolian Islands
Last ao amin'ny lisitra ny toerana tsara indrindra mba hitsidika in South Italia. The Aeolian Islands! Izy ireo ho toy ny Hawaii fantatra ny Italia. Izany dia tady ny nosy avaratr'i Sicily, ary tena dikany tsara tarehy. Araka ny mahagaga dia mety ho toy ny, zara raha misy mahafantatra ny momba izany. Fa ny olona izay mitandrina miverina. Satria fantany izy ireo dia manana ny toerana rehetra ho any ny tenany.
Nanofa môtô mba mivezivezy tsara tarehy mainty torapasika. Masoandro aperitivo in Pollara. Mitsangantsangana manodidina ny manodidina nosy Stromboli, Panarea, ary Lipari. Getting mafanan'ny amin'ny rano solifara Spas in Vulcano. Ilay teny grika vibes (tsy mahagaga - ny nosy no atao hoe for Aeolus, ny andriamanitry ny rivotra, ny Grika voanjo). Salt vokany trano nandraraka nidina ho any amoron-dranomasina. Ary hahatsapa ho toy ny ianao ao amin'ny miafina lehibe izay ihany no te-anjara amin'ny olon-tiany!
Insider tendron'ny: dia lavitra eto eo Paka-Oktobra sy ny Bokin'i mialoha raha te-hitsidika tamin'ny Aogositra!
Vonona ny entana ny kitapo ho an'ny atsimon'i Italia diany? Dia boky ny tapakila amin'ny fiarandalamby Save A Train ao anatin'ny in minitra. Tsy misy sarany fanampiny, tsy Fuss, fahafinaretana fotsiny!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Best Places hitsidika In Atsimo Italia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-visit-south-italy/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#italyholiday #SouthItaly #SummerinItaly #TrainTravelItaly italyvacation fiaran-dalamby nankany